WAR SAXAFADEED-Booqashadii Wasiirka UK ee Arrimaha Africa ee Soomaaliya timid – Bandhiga
WAR SAXAFADEED-Booqashadii Wasiirka UK ee Arrimaha Africa ee Soomaaliya timid
Wasiirka UK ee Arrimaha Africa, Harriet Baldwin MP, aya marki ugu horeesay safar booqasha ah kuimaatay daba yaaqadi todobadkan Soomaaliya, iyado tagtay Muqdisho iyo Hargeisa.
Wasiirada Baldwin aya safarkeedi imaanaya marki mardhow safar lamid aah ay kutimid Africa Raisuul Wasaaraha UK, Theresa May iyado shaacisay taageero cusub ay ubalanqaaday Soomaaliya, sidii looga xal gaari laaha arrimaha qota dheereyay ee amaanka iyo xasiloonida.UK ayaa kamid ah sadeexda wadan ee ugu horeeya, deeq bixiinta Soomaaliya.
Wasiirada waxay Muqdisho kulan kulaqaadatay Ra’isul Wasaree Hassan Ali Kheire, iyado ugu boogadisay arrimaha hormarined ay hirgalisay dowlada, Wasiirada aya kubalanqaaday in ay Ingiirska si xoojinaayo tageerada Dowladda Federaalka ee Soomaaliya iyado kucel celisay mashariicdi hormarinayd ee muhiim ah oo ay hirgalisay Dowladda UK.
Booqashadan aya imaanayso, gor ay Wasiirada ay shir hogaamisay kulan oo looga hadlayay arrimaha amniga Soomaaliya taaso kadhacay magaaladda New York xarunta UN-ka. Inti ay Muqdisho ay jogtay aya waxay booqatay xarunta poliska lagu tababaro taaso oo ay maalgaliso UK iyo xarumaha AMISOM, iyado ka codsatay wadamada aduunka in ay deeq bixintoda lacageed ku aadan AMISOM ay sii kordhiyaan.
Mar ay kulan layeelatay wadamaha adduunka ee deeq bixinta arimaha bani’aadmiga ayaay kubalanqaaday in ay UK safka hore ugu jirto arrimaha bani’aadmiga iyo deeq bixinta. Wasiirada aya waxaa oo kale afka kudhufatay balanqaadki $60million ay ubalanqaaday Soomaaliya Raisul Wassare Theresa May sidii logu horumarin lahaa mashaariic oo farabadan oo bini’admi nimada katirsan.Maalinki labaad ee boqashadeeda aya waxay socdal kutagtay magalada Hargeysa. Waxay shir laqadatay Madaxwayne Muse Bixi iyado kala hadashay musacada hormarineed, shaqa abuurinta iyo horumarka daqaalaha.
Wasiirada aya waxay so indhaysee sida ay UKaid ay wax isbadal Ku ool ay ugu qabatay Soomaaliya iyado booqatay xaruunta nacfi siinta ee caruurta iyo hoyooyinka taaso maalgaliso UKaid.
Iyado kahadlayso marki ay uso damaataay booqashadi aya waxay tiri,
“Marki ugu horeyse an booqasho ku imaado Soomaalia, waxa farxad ee aah in an la kulmay Raisul Wasare Kheire anigoo ka wadahadlay arrimaha na qusiyo oo aah amaanka iyo horumarka Soomaaliya.UK waxaa ka go’an in ay caawiso Soomaaliya dhinaca amniga, sidii lo qaban lahaa doorasha demoqoradi aah taso dhaliso horumarka dhinaca daqalaha oo ay ubahantahay Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed”.